Daawo sida garsooraha ugu tuntey ciyaartii Somaliya iyo Simbabwe iyo rajada jirta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Daawo sida garsooraha ugu tuntey ciyaartii Somaliya iyo Simbabwe iyo rajada jirta
Waxa dadka Somaliyeed halmar ku soo baraarugeen dhalinyar Somaliyeed oo is abnaabuley oo damac ka galay inay matalaan dalkooda ciyaaraha aduunka meelkasta oo ay joogaan. Waxayna taasi keentay in guushii ugu horeysay muddo ku dhow 40 sano soo hooyaan.
Somaliya ayaa abidkeed ciyaar caalami ah ka badisay Kiiniya sanadii 1984 inkastoo ciyaaraha da’doodu ka hoosayso sideed iyo toban jirka ay garaaceen Nayjeeriya sanadii 1987 una dhawaadeen inay aadaan ciyaarta kama dambeysta.
Waxa ciyaartaas dhegeystay in ka badan 5 milyan oo Somali ah kana dhegeystay radiyo Muqdisho xilligii qaranku jirey. Hadaba Somaliya ayaa garaacdey Simbabwe waxay soo jiidatey dhegaha dad badan.
Waxayna u hanqal taageyaan tolow maxaa xiga ma gudbi doonaan wareega labaad. Ciyaartii maanta waxa ku tuntey garsooraha oo markii la taabto ciyaartowda kale afuufaya siidhiga. Waxayse ku dhawaadeen guul daqiiqadihii u dambeeyay oo goolyaha badbaadiyay.
Ciyaari waa gelin dambe welina laysma gaadhin inkastoo maanta aan guuldaraysanayn haddana waxa tani muujinaysaa inaan ciyaaraha kale ee soo socda ee Afrika aan horumar samayno. Waxa dhinaca kale guushu raacdey Jabuuti taasna dhegeha halagu hayo.